रुकुम घटना र रेखा थापाको धारणा -FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
रुकुम घटना र रेखा थापाको धारणा
फिल्मी फण्डा । रुकुममा भएको घटनाले फरक रुप निर्धारण गरिरहेको छ । कानुन अनुसार अनुसन्धान भईरहेको घटना माथी विभिन्न बिचार र धारणाहरु राख्नु खास उचित मानिदैन । तर पछिल्लो समय मिडियाको ढाडसमा युट्युबरहरुले घटनाको वास्तविकता भन्दा फरक प्रवृतीहरु बाहिर ल्याईदिएका छन् ।
वास्तवमा दिनै पिच्छे प्रमाण सहित भन्दै राखेका अनावश्यक भिडियोहरुले गर्दा फरक फरक धारणाहरु समेत बाहिर आईरहेको अवस्था छ । यसमा साधारण नागरिकदेखी सदनमा सांसदहरुले समेत कुरा उठाएका छन् ।
यति मात्र हैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यस विषयमा चासो व्यक्त गर्दै जातियताको विषयमा भएको अपराध जघन्य हुने भन्दै कडा कार्वाही हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । यस विषयमा पछिल्लो समय नेपाली सेलेब्रेटीहरुले पनि आफ्नो धारणाहरु राखिरहेका छन् ।
महानायक राजेश हमालले अहिलेको समयमा जातियताको कुरा लिएर भेदभाव गर्ने र हत्या समेत गर्ने निर्दयीहरुलाई कडा कार्वाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यहि क्रममा नायिका रेखा थापाले पनि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेकी छन् ।
उनले हत्या काण्डलाई फरक रुप दिदै महिलाको चरित्रहत्या गर्ने प्रयास भईरहेकोले त्यस्तो नगर्न र त्यस्तो हर्कत गर्नेमाथी कार्वाही गर्न माग गरेकी छन् । नवराज विक र सुष्मा मल्लको प्रेममा आएको फेहरिष्ट एउटा घटनामा परिणत भयो । हत्या काण्डको रुपमा अगाडी आयो । जसमा नवराव विकसहित केही यूवाको ज्यान गयो ।
दोषिमाथी कार्वाही हुनुपर्छ तर घटनाको रुपलाई परिवर्तन गर्दै सुष्मा मल्लको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भईरहेको भन्दै रेखा थापाले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेकी हुन् । उनले दोषिमाथी कार्वाही गर्न जोडदार माग गरेकी छन् ।
उनले लेखेकी छन्, ‘समाजविरुद्ध अन्तर्जातिय प्रेम गर्ने सहास भएकी बालिकाको चरित्रहत्या गरेर न्याय हुन्छ त ? दोषीलाई कानुनी कारबाही हुनु पहिले नै एउटा केटी मान्छेले आफ्नो सामाजिक र चारित्रिक सम्पत्ति बजारमा लिलाम गर्नुपर्ने ? नेपालमा केटी मान्छेको बेइजत गरेर मात्र न्याय पाउने हो र ? छानबिनको क्रममा रहेकी किशोरीको बारेमा अनर्गल कुरा लेख्ने छुट छ ?’
उनले थपेकी छिन्, ‘समुहमा बाहुन क्षेत्री, जनजाती जो जसलाई गाली गर्नु छ गरे हुन्छ ? एउटा केटी मान्छेको पेटिकोट समातेर बिद्रोह हुन्छ ? दोषी वा निर्दोषको किटान हुनु पहिले नै यसरी मानसिक हिंसा र प्रताडना दिएको कारण ती किशोरी नदिमा हाम्फालेमा कसले जवाफ दिन्छ ?’ अन्तर्जातिय प्रेम गरेको सट्टा जसरी उस्को चरित्र हत्या हुँदैछ,
यसले जातिबादी सोचलाई झन धेरै बालवालिकामा स्थापित गर्ने देखिन्छ । राज्य सँग लडनु पर्‍यो नि, एउटा १७ बर्ष कि किशोरिलाई मानसिक र सामाजिक उत्पिडन किन ? दोषी भये कानुनी कार्वाही गरियोस ।
यो नबिर्सौ कि एउटा किशोरिको जीवन बर्वाद पारेर न्याय पाउने हो भने, कुनै पनि छोरीले भोली कसैलाई माया गर्ने छैनन । घटनाको छानबिनको नाममा र गलत प्रचारको दस्प्रयासले निर्दोेष बालिका माथीको प्रहार सह्य नभएको रेखाले जिकिर गरेकी छन् ।